दशैं मान्नु कि नमान्नु सरकार ? - Baikalpikkhabar
दशैं आयो !दशैं आयो ! सबैले भन्छन् दशैं आयो । दशैं किन र कसका लागि आइरहेको छ ? आममानिसको मनस्थितिमा प्रश्न बनेर जबर्जस्त आएको छ, यो पटकको दशैं । अनि सबैले एकै स्वरमा प्रश्न गर्ने बेला आएको छ– महँगीले ढाड थिचेको बेला दशैं मान्नु कि नमान्नु सरकार ?
चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढेको छ । पछिल्लो समयमा चुलिएको मूल्यवृद्धिसँगै आम नागरिक क्रयशक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य चुलिएपछि सर्वसाधारण मार खेप्न बाध्य छन् । कोभिडले सिर्जना गरेको बढ्दो बेरोजगारीका कारण एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ–धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कोरोना महामारी केही शिथिल भएपनि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ । घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन कसरी सञ्चालन होला भनेर सोच्दा समेत कहालीलाग्दो अवस्था सृजना हुन थालेको सत्य छ ।
सोमबार, २५ असोज, २०७८, दिउँसोको ०१:५० बजे